03 / 05 / 2021 03 / 05 / 2021 Dimitri 921 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၅၁၈၇ BB-75187, ၇၅၂၅၅ Yoda, 75278 DO, 75306 မှာ Imperial စုံစမ်းစစ်ဆေး Droid, 75318 အဆိုပါကလေး, BB-8, လုပ်ပါ, အင်ပါယာ, Grogu, Lego, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Star Wars, LEGO.com, reviews, Star Wars, Yoda
သင်သည်အခြား buildable ကိုရှာဖွေရန်ရှာနေလျှင် Lego Star Wars သင်၏ရေဒါကိုအာရုံစိုက်သင့်သည် 75306 မှာ Imperial စုံစမ်းစစ်ဆေး Droid - စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးထူးခြားသောနည်းစနစ်အချို့ကိုပေးပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ပြီးစီးပြီးသည်နှင့်စစ်မှန်ပြီးတိကျသောပုံစံဖြစ်သည်။
ကြီးမားသောအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောစာလုံးများနှင့် droids တို့၏အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုများသည်အဓိကအရာဖြစ်လာသည် Lego Star Wars ခေါင်းစဉ်။ ကတည်းက ၇၅၁၈၇ BB-75187 ပရိတ်သတ်တွေမှကုသခဲ့ကြ 2017 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည် Lego ထိုကဲ့သို့သော Yoda, Grogu နှင့်တူသောပန်ကာအကြိုက်ဆုံး၏ပြန်လည် လုပ်ပါ.
ယခုအင်ပါယာ၏အစက်အပြောက်များအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံကိုအာရုံပြောင်းရန်အချိန်ရောက်လာပြီ 75306 မှာ Imperial စုံစမ်းစစ်ဆေး Droid။ ယခင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာများ၏အရည်အသွေးပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်ပစ်မှတ်ကိုရှာဖွေနိုင်သောအစုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
theme: Lego Star Wars အမည်သတ်မှတ်မည် - 75306 မှာ Imperial စုံစမ်းစစ်ဆေး Droid ဖြန့်ချိ: ဧပြီလ 26, 2021
စျေးနှုန်း: £ 59.99, $ 59.99, € 69.99 အပိုင်းပိုင်း: 683 အသေးစားပုံများ: 0
Lego: ယခုရရှိနိုင် Jadlam ကစားစရာများ: ယခုရရှိနိုင်
အထက်ပါဖော်ပြချက်များနှင့်မတူဘဲ Imperial Probe Droid သည် ပို၍ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောယူနစ်ဖြစ်သည်။ tentacle ကဲ့သို့နောက်ဆက်တွဲခြောက်ခုတွဲဆွဲထားသောခန္ဓာကိုယ်သေးငယ်စွာပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းသည်အခြားအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော droid နှင့်လုံးဝထူးခြားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်တည်ဆောက်မှုသည်ကြီးမားသောလုံးဖုံးထားသည့်အတွင်းပိုင်းအမာခံကိုတည်ဆောက်ရန်မလိုအပ်ပါ။
75278 DO သေးငယ်တဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အသေးစိတ်အပိုင်းအစပါဝင်သည်ပထမ ဦး ဆုံး set ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုမော်ဒယ်လ်တွင်အဓိကအားဖြင့်ခင်းကျင်းပြသမှုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီမှာအခြေစိုက်စခန်းဟာအများကြီးပိုကြီးရုံတင်မကဘဲ၊ ပုံစံကိုဖြောင့်မတ်စွာထားဖို့လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။ အမျိုးမျိုးသောအဖြူရောင်ဆင်ခြေလျှောများနှင့်ပြားပြားများအသုံးပြုခြင်းသည်စစ်မှန်သောအေးခဲနေသောနှင်းဖုံးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဖြူရောင်ကြားတွင်ဖြန့်ကျက်ထားသောမီးခိုးရောင်တောင်စောင်းများကဗေဒကိုထပ်မံဖြည့်စွက်သည်၊ Star Wars Hoth ၏ရေခဲကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အခြေခံပြီးအစုံ။
အဖြူရောင်ဘယ်ညာနှင့်ညာဘက် ၁ × ၂ ပြားများခင်းကျင်းပြသမှုပြားကို ဖြတ်၍ ဖြတ်တောက်ခြင်းများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အခြေခံကျသောareaရိယာတစ်ခုလုံးကိုကောင်းမွန်သောနှင်းဖုံးလွှမ်းစေသည့်ဗေဒကိုပေးသည်။ တစ်ခုလုံးကတကယ်ပဲချောမော်ဒယ်၏ဆွဲဆောင်မှုကိုထပ်ပြောသည်။ အပိုဆုတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည် Han၊ Chewie နှင့် Minifigure - Probe Droid ပါ ၀ င်သောထူးခြားသည့် minifigure-scale display အတွက်နှစ်ဆတိုးနိုင်သည်။
ခင်းကျင်းပြသထားသည့်အကွာအဝေးနှင့်အတူတည်ဆောက်မှု၏ကျန်သည်မျှတသောပုံစံဖြင့်တိုးတက်သည်artအဆိုပါ Probe Droid ၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူ ing, ရှည်လျားသော dangling နောက်ဆက်တွဲများနှင့်နောက်ဆုံးတော့ ဦး ခေါင်းနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ခန္ဓာကိုယ်၏အလယ်ဗဟိုကိုအများအားဖြင့်သပ်ပြားများဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားပြီးဘားလက်ကိုင်များနှင့် ၁x1x1 အုတ်များပါ ၀ င်သည့် ၁ × ၁ ပတ်ပတ်လည်ပြားများနှင့်အနားပတ်လည်ရှိနှစ်ဖက်စလုံးတွင်တွယ်ကပ်ထားသောအပြားများဖြစ်သည်။
၎င်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောပတ္တူပြားများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော2×3ဆင်ခြေလျှောများ၊ လိုအပ်သောထောင့်များကိုရရှိစေရန်သို့မဟုတ်သေးငယ်သောပြားများ၊ ပြားများနှင့်ကလစ်များ သုံး၍ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် greebling တို့ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ On-screen counterpart။ စတစ်ကာများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြရန်အသုံးပြုကြပြီး၎င်းတို့သည်အမှန်တကယ်အလွန်ထိရောက်သည်၊ ဤအပိုင်းသည်အုတ်များအပေါ်သာမှီတည်သည်ထက် ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့နောက် ၁ × ၃ တောင်စောင်းလေးများကိုခန္ဓာကိုယ်၏ကျန်တစ်ဝိုက်ရှိကွက်လပ်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အသုံးပြုသည်။ အနီးကပ်ကြည့်ရှုသည့်အခါ၎င်းသည်မစုံလင်ပါ၊ သို့သော်အဝေးမှကြည့်လျှင်ကြည့်ကောင်းပါသည်
Viper Probe Droid ၏ဒီဇိုင်းသဘောသဘာဝကြောင့်တည်ဆောက်မှုသည်နေရာများစွာတွင်အလွန်ရှုပ်ထွေးမှုရှိနိုင်သည်။ သေးငယ်သောအပိုင်းအစများဖြင့်အသေးစိတ်အတွက်အသုံးပြုသည်။ အသေးစား roller စကိတ်များနှင့်ရေခဲစကိတ်စီးများ, သေနတ်အခြေစိုက်စခန်းများ, ဖယောင်းတိုင်ကိုင်ဆောင်သူ, ဓါးသွားကိုမြင်လျှင်နှင့်ပို။ အချိန်များတွင်ပူးတွဲဖို့အတော်လေးမကျေနပ်မှုဖြစ်လျှင်, မော်ဒယ်မှအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားမှုကိုထည့်ပါ။
၎င်းသည် p ၏တကယ့် hotchpotch ဖြစ်သည်arts နှင့်တစ်ခါတစ်ရံပိုအပိုဆောင်း p ကိုအသုံးချဖို့, ထုံးစံအဆောက်အ ဦ များကဲ့သို့ပိုပြီးခံစားရတယ်artတရား ၀ င်သတ်မှတ်ချက်မဟုတ်ဘဲပတ်ပတ်လည်တွင်အိပ်နေကြသည်။ ၎င်းသည်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စိတ်ရှည်သည်းခံမှုလိုအပ်သော်လည်းအလွန်ဖျော်ဖြေမှုနှင့်လန်းဆန်းမှုပြုလုပ်ရန်အထူးပြုလုပ်ထားသည်။
ခြေထောက်တစ်ခုစီသည်ပတ္တာများစွာပါ ၀ င်ပြီးများသောအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောပမာဏများစွာကိုခွင့်ပြုထားသည်။ ခြေထောက်များကိုခန္ဓာကိုယ်အောက်၌သိုမှီးထားနိုင်သည်သို့မဟုတ်အချို့မှာထောင့်တည့်တည့်ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောထိတွေ့မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးရလဒ်အနေဖြင့်မော်ဒယ်၏ display ကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ နောက်ဆက်တွဲတစ်ခုချင်းစီသည်လည်းထူးခြားသည်။ ထို့ကြောင့်တစ်ချက်ကြည့်လျှင်မျှမျှတတထပ်ခါတလဲလဲတည်ဆောက်ပုံဖြစ်သော်လည်းအမှန်တကယ်မှာဘာမှမဟုတ်ပါ။
ဦး ခေါင်းသည်တည်ဆောက်မှုတစ်ခုလုံး၏အပျော်ရွှင်ဆုံးနှင့်ပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုလက္ခဏာဖြစ်သည်။ အမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးသောစားပွဲများနှင့်ဟင်းလျာများသည်အနားပတ်ပတ်လည် 1 × 1 ပတ်ပတ်လည်ပြားများနှင့် 1L ဘားအတော်များများသို့အပေါက်များဖြင့် ဦး ခေါင်း၏အလယ်ဗဟိုကိုချိတ်ထားသည်။ အပိုင်းအစတစ်ခုချင်းစီကို slot လုပ်ပြီး ဦး ခေါင်းရဲ့အသေးစိတ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတည်ဆောက်ပုံကိုကြည့်ရတာတကယ်ကျေနပ်စရာပါ။
ရွေ့လျားနေသောခြေထောက်များ မှလွဲ၍ အခြားမော်ဒယ်များကဲ့သို့ကစားခြင်းအင်္ဂါရပ်များသိပ်မများလှပါ - တကယ်တော့မရှိပါဘူး။ ၎င်းသည်ပြသရန်အတွက်သက်သက်သာဖြစ်သောမော်ဒယ်တစ်ခုဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
အဝေးမှကြည့်ရှုသည့်အခါအချောပုံစံသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ အနီးကပ်ကြည့်ရှုသည်။ ၎င်းသည်နေရာများတွင်အနည်းငယ်ရိုးရှင်းပါသည်။ ဒီဟာကိုပြင်ဆင်ရန်ခြေထောက်များနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ပြားများထဲသို့ပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ထို့အပြင်တိကျမှုရှိစေရန်ဒီဇိုင်နာများသည်တည်ဆောက်မှုတစ်ခုလုံးကိုအရောင်တစ်ခု၊ အနက်ရောင်မီးခိုးရောင်များကိုအသုံးပြုရန်ဖိအားပေးခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် BB-8 အမျိုးအစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်အနည်းငယ်သောဝေဒနာများခံစားရပြီးနေရာအချို့တွင်လွင်ပြင်အနည်းငယ်သာကြည့်နိုင်သည်။ သို့သော်အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောခင်းကျင်းပြသမှုကြောင့်တစ်ခုလုံးသည်ထူးခြား။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။
ယခင်ကအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော droids နှင့်ဇာတ်ကောင်များသည်ပိုမိုကြီးမားသောမော်ဒယ်၏သေးငယ်သောပုံစံဖြစ်သည်။ 75306 မှာ Imperial စုံစမ်းစစ်ဆေး Droid မထားဘူး သေးငယ်တဲ့အာကာသယာဉ် droid လည်းထည့်သွင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဟာအဓိကမော်ဒယ်ကနေအာရုံပြံ့လှငျ့ခဲ့ကြပေသည်, ဒါပေမယ့်လက်ရှိ minifigure စကေးစုံစမ်းစစ်ဆေး droids ၏မူကွဲလိုချင်သောအရာအများကြီးစွန့်ခွာအဖြစ်ကလွဲချော်အခွင့်အလမ်းကဲ့သို့ခံစားမိပါဘူး
ဒီအစုလေးကို ၀ ယ်တဲ့သူတွေကဒီသေးငယ်တဲ့ပုံစံနဲ့မ ၀ ယ်တာဖြစ်နိုင်တယ်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအလားတူအစုံပေါင်းများစွာကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးစျေးနှုန်းကိုစဉ်းစားသောအခါနှိုင်းယှဉ်ရန်လွယ်ကူသည်။ 75306 မှာ Imperial စုံစမ်းစစ်ဆေး Droid တကယ်တော့စျေးကွက်ထဲမှာဈေးအပေါဆုံးနဲ့တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ droid ပါ။ ဒါပေမယ့်ဒါကိုအနည်းငယ်စဉ်းစားလို့မရအောင်သင့်ကိုမယုံပါစေနဲ့။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကန့် 75278 DO အနည်းငယ်ပိုစျေးကြီးပေမယ့်သိသိသာသာနိမ့် p ရှိခဲ့ပါတယ်art ရေတွက် Imperial Probe Droid မော်ဒယ်၏တကယ့်မျက်နှာပြင်နှစ်သက်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောဆီးနှင်းရှုခင်းများပါ ၀ င်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းနှင့်ပုံရသည်။
75306 မှာ Imperial စုံစမ်းစစ်ဆေး Droid တည်ဆောက်နိုင်သည့် droids subtheme ကိုလန်းဆန်းစေသည် (သင်က subtheme ဟုခေါ်နိုင်လျှင်?) ။ display base သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး Hoth ၏နှင်းဖုံးဝှမ်းလောင်ကျွမ်းသောနေရာများကိုအမှီပြုရန်အလွန်ကောင်းသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ရှိဆွဲချထားသော droid ၏အမျိုးမျိုးသောဒီဇိုင်းများသည်ပျော်စရာကောင်းပြီးမတူညီသောတည်ဆောက်မှုဖြစ်စေရုံသာမကကြည့်ရှုရင်းစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအဆင့်ကိုလည်းဖန်တီးပေးသည်။ နောက်ဆုံးမော်ဒယ်မှာ။
Viper Probe Droid သည်လူကြိုက်အများဆုံးသို့မဟုတ်လူကြိုက်များသော droids များမဟုတ်ပါ Star Wars galaxy, ဒါပေမယ့်သေခက်ခဲတဲ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက်ဒီ model ကိုနားလည်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်။ ၎င်းသည်မဖြစ်မနေဝယ်ရမည့် ၀ ယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်အသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေပါကလူအနည်းငယ်သာစိတ်ပျက်ရပါလိမ့်မည် Lego set ကိုအပေါ်အတွက် zeroing တက်အဆုံးသတ်ထားသည် 75306 မှာ Imperial စုံစမ်းစစ်ဆေး Droid.
ဒီအစုံအားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည် Jadlam ကစားစရာများ.
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့မိတ္တူဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး 75306 မှာ Imperial စုံစမ်းစစ်ဆေး Droid မှ Jadlam ကစားစရာများ or LEGO.com ငါတို့သုံးနိုင်သည် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
75306 Imperial Probe Droid တည်ဆောက်ရန်မည်မျှကြာမည်နည်း။
75306 မှာ Imperial စုံစမ်းစစ်ဆေး Droid p ခြောက်အိတ်လိုအပ်သည်artပြီးစီးမတိုင်မီမှတဆင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ခံရဖို့ s ကို။ တည်ဆောက်မှုပြီးဆုံးရန်နှစ်နာရီခန့်ဖယ်ထားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
75306 Imperial Probe Droid တွင်မည်မျှအပိုင်းအစများရှိသနည်း။
75306 မှာ Imperial စုံစမ်းစစ်ဆေး Droid အပိုင်း ၆၈၃ ခုပါ ၀ င်ပြီးမနှစ်ကထက် ၁၀၀ ကျော်ပိုပါတယ် 75278 DO။ အားလပ်ချိန်မှာ p ၏ဝန်လည်းရှိပါတယ်artအဆိုပါ Probe Droid ၏အမျိုးမျိုးသောနောက်ဆက်တွဲများ၏ယန္တရားအချို့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
75306 Imperial Probe Droid သည်မည်မျှကြီးသနည်း။
75306 မှာ Imperial စုံစမ်းစစ်ဆေး Droid အကျယ် ၂၇ စင်တီမီတာ၊ အကျယ် ၂၄ စင်တီမီတာနှင့်အနက် ၁၁ စင်တီမီတာရှိသည်။ ဒါဟာအကြမ်းဖျင်းအတူတူပင်အရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ် 75278 DOသို့သော်အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော display base က၎င်းကိုပိုမိုကြာရှည်သောမော်ဒယ်လ်ဖြစ်စေသည်။
75306 Imperial Probe Droid သည်မည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်။ 75306 မှာ Imperial စုံစမ်းစစ်ဆေး Droid ထံမှဝယ်ယူရန်ရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com, Lego စတိုးဆိုင်များနှင့်ယူကေရှိပေါင် ၅၉.၉၉၊ ယူအက်စ်တွင်ဒေါ်လာ ၅၉.၉၉ နှင့်ဥရောပတွင်ယူရို ၆၉.၉၉ အတွက်စတိုးဆိုင်များနှင့်ကောင်းမွန်သော stockists အားလုံးဖြစ်သည်။
← နောက်ထပ် Lego Star Warsဖြေ - Mandalorian set ကလမ်းပေါ်မှာရှိနေနိုင်တယ်
Lego Ideas စက်ဘီးလမ်းကြောများသည် 10K ထောက်ခံသူများအားလမ်းကြောင်းပြောင်းသည် →